Ungaita Sei Kana Uchizvidya Mwoyo Nenyaya Dzemhuri
SARUDZA MUTAURO Acholi Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Batak (Toba) Bengali Bulgarian Cakchiquel (Western) Cambodian Catalan Cebuano ChiHmong (chinonzi cheWhite) ChiKaren (S'gaw) ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Cibemba Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Dutch Efik Estonian Ewe Fijian Finnish French Ga Garifuna Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Iban Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kannada Kazakh Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Kisonge Kongo Korean Krio Lamba Latvian Lhukonzo Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Marathi Maya Mazatec (Huautla) Mongolian Moore Myanmar Nahuatl (Huasteca) Ndebele (Zimbabwe) Ngabere Norwegian Nyaneka Nzema Oromo Ossetian Otetela Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Punjabi Quechua (Bolivia) Quichua (Imbabura) Rarotongan Romanian Runyankore Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tlapanec Tojolabal Tok Pisin Totonac Tshiluba Tsonga Turkish Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Urdu Vietnamese Waray-Waray Wayuunaiki Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zulu
Kuzvidya Mwoyo Nenyaya Dzemhuri
“Baba vachangobva kufa, murume wangu akandiudza kuti akanga ava kudanana nemumwe mukadzi,” anodaro Janet. “Pasina nguva, akazongoerekana atuta hembe dzake ndokundisiya nevana vaviri.” Janet akawana basa, asi peyi yake yaisakwana kubhadhara rendi. Kuwedzera panhamo yemari, aivawo nemamwe matambudziko. Anoti, “Ndakanga ndava kuzvidya mwoyo zvisingaite nemabasa aichimboitwa nemurume wangu andainge ndava kufanira kuita. Ndaizvipa mhosva yekuti ndaitadza kuriritira vana vangu sezvaiitwa nevamwe vabereki. Kunyange nanhasi, ndichiri kunetseka kuti vamwe vanondiona sei nevana vangu. Vanofunga here kuti handina kuita zvose zvandaikwanisa kuti ndichengetedze imba yangu?”
Kunyengetera kunobatsira Janet kuti asanyanya kunetseka uye kuti ave pedyo naMwari. Anoti: “Usiku ndihwo hwakanyanya kundiomera. Pakunenge kwakati zii, ini ndinenge ndichishushikana mupfungwa. Kunyengetera uye kuverenga Bhaibheri zvinondibatsira kuti ndibatwe nehope. Rugwaro rwandinonyanya kufarira ndiVaFiripi 4:6, 7 urwo rwunoti: ‘Musazvidya mwoyo pamusoro pechinhu chero chipi zvacho, asi muzvinhu zvose kukumbira kwenyu ngakuziviswe Mwari nokunyengetera nokuteterera pamwe chete nokuonga; uye rugare rwaMwari runopfuura kufunga kwose rucharinda mwoyo yenyu nesimba renyu rokufunga.’ Usiku hwakawanda ndinonyengetera uye ndinonyatsonzwa rugare rwunobva kuna Jehovha rwuchindinyaradza.”
Mashoko anosimbisa akataurwa naJesu muMharidzo yepaGomo nezvemunyengetero anoshanda pasinei nekuti chii chingave chichitidya mwoyo. Iye akati: “Baba venyu vanoziva kuti zvinhu zvipi zvamunoda musati mambovakumbira.” (Mateu 6:8) Asi tinofanira kuvakumbira. Kunyengetera ndicho chinhu chikuru chinoita kuti ‘tiswedere pedyo naMwari.’ Kana tikadaro, “iye achaswedera pedyo” nesu.—Jakobho 4:8.
Munyengetero unoita kuti tinzwe zviri nani pashure pekuudza Mwari zvinenge zvichitinetsa. Unewo zvimwe zvaunotibatsira. “Munzwi womunyengetero,” Jehovha, anobatsira vaya vanomukumbira vaine kutenda. (Pisarema 65:2) Ndokusaka Jesu akadzidzisa vateveri vake “kugara vachinyengetera vasinganeti.” (Ruka 18:1) Tinofanira kuramba tichikumbira Mwari kuti atitungamirire uye atibatsire, tiine chokwadi chekuti achatinzwa nekuti tinenge tiine kutenda. Hatifaniri kumbova nekapfungwa kekuti haadi kana kuti haakwanisi kutibatsira. ‘Tikaramba tichinyengetera’ seizvi, tinenge tichiratidza kuti tine kutenda kwechokwadi.—1 VaTesaronika 5:17.
KUVA NEKUTENDA KUITA SEI CHAIZVO?
Asi chii chaizvo chinonzi kutenda? Kutenda kunosanganisira ‘kuziva’ Mwari, tomuona semunhu chaiye. (Johani 17:3) Kudzidza Bhaibheri kuti tinzwisise pfungwa dzaMwari ndiro danho rekutanga pakuita izvi. Izvi zvinoita kuti tizive kuti Mwari anoona mumwe nemumwe wedu uye anoda kutibatsira. Asi kutenda kwechokwadi kunopfuura kungoziva nezvaMwari. Kunorevawo kuva pedyo naye tichimuremekedza. Zvinotora nguva kuti vanhu vazova shamwari. Ndizvowo nekuva neushamwari naMwari. Kutenda kwedu kunoramba ‘kuchiwedzera’ nekufamba kwenguva sezvatinodzidza zvakawanda nezvake, ‘tichiita zvinomufadza,’ uye tichiona kubatsira kwaanotiita. (2 VaKorinde 10:15; Johani 8:29) Kutenda kwakadai ndiko kwakabatsira Janet kuti akunde kuzvidya mwoyo.
Janet anoti, “Kubatsirwa kwandakaitwa naJehovha pose pandainetseka kwakasimbisa kutenda kwangu. Kakawanda takasangana nematambudziko aiita sekuti haakundiki. Ndainyengetera kakawanda, uye Jehovha aigara achindibatsira kubuda mumatambudziko iwayo nenzira yandaisambofungira. Pandinomutenda, ndinobva ndayeuka kuti ane zvakawanda zvaakandiitira. Anogara achitibatsira panguva chaiyo yatinenge tichida rubatsiro. Akandipawo shamwari dzechokwadi dzechiKristu, varume nevakadzi. Vanogara vachindibatsira uye vanoratidza muenzaniso wakanaka kuvana vangu.” *
“Ndinoziva kuti sei Jehovha achiti ‘anovenga kurambana,’ pana Maraki 2:16. Uya anenge arambwa asina mhosva, anenge arasiswa zvisingaite. Kunyange zvazvo patova nemakore ndasiyiwa nemurume, dzimwe nguva ndinombonzwa sekuti handibatsiri chinhu. Panguva dzakadai, ndinoedza kubatsira mumwe munhu, uye izvi zvinoita kuti ndinzwe zviri nani.” Sezvinokurudzirwa neBhaibheri, Janet haazviparadzanisi nevamwe, uye izvi zvinomubatsira kuti asanyanya kuzvidya mwoyo. *—Zvirevo 18:1.
Mwari ‘ndibaba venherera, nemudziviriri wechirikadzi.’—Pisarema 68:5
Janet anoti, “Kuziva kuti Mwari ‘ndibaba venherera, nemudziviriri wechirikadzi,’ kunondibatsira chaizvo. Haazombotisiyi sezvakaitwa nemurume wangu.” (Pisarema 68:5; Bhaibheri Dzvene muChiShona Chanhasi) Janet anoziva kuti Mwari haatiedzi “nezvinhu zvakaipa.” Asi anotopa uchenjeri “kuna vose” uye “simba rinopfuura renguva dzose” kuti atibatsire kukunda kuzvidya mwoyo.—Jakobho 1:5, 13; 2 VaKorinde 4:7.
Ko tingaita sei kana tichizvidya mwoyo pamusana pekuti upenyu hwedu huri pangozi?
^ ndima 9 Ona 1 VaKorinde 10:13; VaHebheru 4:16.
^ ndima 10 Kuti uwane mamwe mashoko ekuti ungakunda sei kuzvidya mwoyo, ona nyaya iri pakavha inoti “Are You in Control of Your Life?” iri muAwake! yaJuly 2015 iyo inowanikawo pawww.jw.org.